Araka ny efa nambaran’ny filoham-pirenena hatrany dia miainga any amin’ny faritra Atsimo ny fampandrosoana an’i Madagasikara. “Mbola hamafisiko ary mbola hoteneniko foana fa ny fampandrosoana an’i Madagasikara dia hiainga avy aty amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara. …Tohiny
« Ny vava no tsy atao be », hoy ny fomba fitenenana izay. Tena mendrika ho an’ireto MAPAR ireto mihitsy izany fitenenana izany ankehitriny, satria izy ireo izao no mandrafitra ny governemanta. Praiminisitra MAPAR tokoa mantsy ankehitriny …Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Noresahina tamin’ ny fivorian’ ny UA ny mikasika ny fifidianana
Ny marimarina kokoa dia ny filohan’ny kaomisionin’ny vondrona afrikanina sy ny kaomiseran’ny fandriam-pahalemana no anisan’ny noresahin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mikasika ny zava-misy eto Madagasikara, indrindra ny fanomanana ny fifidianana ho avy. Marihina fa nandritra ny …Tohiny
Maurice Tsihiavonana : Alevina anio any Manjakandriana
Rehefa avy nandrasana tetsy amin’ny trano fonenany tetsy Ambatobe Andrefana, dia alevina anio any Ambohidahy Manjakandriana ny nofo mangatsiakan’i Maurice Tsihiavonana Ramanandraibe, izay mpanao gazety sady mpamakafaka ara-politika. Amin’ny 8 ora sy sasany maraina no …Tohiny